'नेपालमा पनि कोरोनाको नयाँ प्रजाति जन्मन सक्छ' - Grameen Khabar
२०७७ फाल्गुन ८, शनिबार १९:३८
काठमाडौं, ८ फागुन । नेपालमा कोरोना संक्रमण देखापरेको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । एक वर्ष पुग्नै लाग्दा कोरोना विरुद्धको खोप पनि नेपालमा आइसकेको छ । पछिल्लो समय आम नागरिकले कोरोनाको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै सामान्य रुपमा आफ्ना गतिविधि गरेका छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम नै नभएको हो कि भन्ने गरी बढ्न थालेको राजनीतिक गतिविधिका कारणले पनि खतरा बढेको जानकारहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुका डा. शेरबहादुर पुन कोरोनाविरुद्वको खोप लगाउने काम सुरु भएको भए पनि सवैले नलगाएको अवस्थामा अझै पनि आफ्ना दैनिकी गतिविधि गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न उतिकै आवश्यक रहेको बताउँछन् । कोरोना हट्यो भन्ने जसरी गरेर मानिस भिडभाड्मा जाँदा पनि मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग नगर्ने गरिएको छ, त्यो गलत भएको उनी बताउँछन् । सबै मिलेर सावधानीका साथ आफ्ना गतिविधि गरेमा परिवार, समाज, देशलाई नै कोरोना संक्रमणबाट बचाउन सकिनेमा उनको ठहर छ ।
अर्को कोरोनाको लहर नआउलाइ भन्न सकिँदैन
नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम अझैँ नटरेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई राम्ररी पालना नगरे महामारी पुनः दोहोरिन सक्ने खतरा त्यतिकै मात्रमा रहेको डा. पुन बताउँछन् । नेपालमा संक्रमण दर पछिल्लो समय घटेको भए तापनि पूर्णरुपमा सरकारले कोरोनामुक्त भयो भनेर घोषणा नगरेसम्म खतरा त्यतिकै मात्रामा रहने उनी बताउँछन् ।
संक्रमण आफै फैलिनेभन्दा पनि मानिसको आवतजावत स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेका कारण सर्ने हो । नेपालमा खानपानको कारण कोरोना संक्रमण कम भयो भन्ने चिया पसल देखि सडक सडकमा भन्ने गरेको सुन्ने गरिन्छ यस विषयमा वैज्ञानिक आधार नभएकोले यो नै भन्न सकिने अवस्था नभएको डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् ।
तर मेरो अनुमान यूरोप अमेरिकामा कोरोनाको दर र क्षति भए जसरी नेपालमा त्यहि अनुपातमा हुन्छ भनेर आफूले पहिले पनि अनुमान नगरेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा कोरोना भाइरसका अरु प्रजाति पनि यस पहिले पनि रहेको उनको भनाइ छ । दोस्रो खालको काेरोनाको संक्रमण बेलायतमा देखापर्न थालेको जस्तै नेपालमा पनि देखापर्न सक्ने वा आयातित हुन सक्ने भएकाले सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन आवश्यक छ ।